Untouch Beauty of Narga | | Yangon Thu Michelle
Untouch Beauty of Narga
Naga is unique ethnic people living along in Myanmar and India border line. January 14 to 16 is their new year day and also harvest day. Yangon Thu Michelle enjoyed their dance and songs. You can seealot of different ethnic groups of Naga.
Visit more on
YouTube @YangonThu Michelle
#yangonthumichelle #michellemayshell #yangon #yangonlifestyle #lifestyleblogger #lifestyle #tipsandtricks #culture #people #colonialbuilding #history #activities #activitiesinyangon #womenempowerment #selfdefense #Heritagemyanmar #naga #nagaland #ethnicpeople #indiaborder #nagafestival #unique
Produced by IDEA LIVE Production
နာဂ … အရိုင်းဆန်တဲ့အလှ
ရန်ကုန်သူမီရှဲ အသွားချင်ဆုံးခရီးထဲမှာ နာဂ ပါတယ်။ ဘာလို့သွားချင်လဲဆိုတော့ သီးသန့်ဖြစ်တည်နေတဲ့သီးသန့်ကမ္ဘာထဲက လူမျိုးစုတွေအကြောင်းသိချင်လို့ပါ။ ဒီဇင်ဘာလကုန်နှစ်သစ်ကူးပြီးလို့ ဇန်နဝါရီပထမပတ်ဆိုရင် နာဂနှစ်ကူးပွဲအကြောင်း သတင်းစာထဲပါလာပြီ။ အဲ့ဒီအချိန်ဆို သွားချင်တာသေတော့မယ်။ မိဘတွေကလည်း ဖုန်းလိုင်းမမိ ဘယ်လိုနေရာမှန်းမသိတဲ့ဒေသကို မလွှတ်။ ဒွိဟစိတ်နဲ့ ရန်ဖြစ်လာတာ လေးနှစ်လောက်ကြာတယ်။ဒီနှစ်တော့ ရန်ကုန်သူမီရှဲအစီအစဉ်ကို အကြောင်းပြပြီး မရမကသွားလိုက်တာပေါ့ ဘယ်ရမလဲ…. ။
နာဂလူမျိုးစုနေထိုင်တာက စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်း ချင်းပြည်နယ်တောင်တန်းနဲ့တစပ်တည်းတောင်တန်းတွေပေါ်မှာ ပြန့်ကျဲနေထိုင်ကြတာပါ။ နာဂနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ရှိမှပဲ ပွဲကျင်းပတဲ့မြို့ကိုတက်လာပြီး လူမျိုးစုအစုံ ရိုးရာအကကို တစ်နေရာထဲ ခံစားကြည်ရှု့လို့ရတာပါ။ ကျန်တဲ့အချိန်ဆို သာမန်မြင်နေကြအတိုင်း ဝတ်စားပြင်ဆင်ထားတာ။ အမဲလိုက် တောင်ယာအလုပ်ပဲ အဓိကလုပ်ကြတော့ နေ့ခင်းဘက်ဆိုလည်း ရွာထဲမှာလူမရှိဘူး။ နှစ်ကူးပွဲကျင်းပတဲ့အချိန်က ကောက်ရိတ်သိမ်းပြီးချိန်ဖြစ်လို့ ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့ကောက်နှံတွေကို သိမ်းဆည်းရင်း စားကြသောက်ကြ ပျော်ရွင်ကြတယ်။ နောက်နှစ်အတွက်လည်း အမဲပေါများ၊ သီးနှံအောင်မြင်၊ ရာသီဥတုမှန်စေဖို့ ဆုတောင်းကြတယ်။ အရင်တုန်းက ရွာအလိုက်လုပ်ကြပေမဲ့ အခုကျတော့ နိုင်ငံတော်အဆင့်နှစ်ကူးပွဲကျင်းပတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဒီပွဲကို တကူးတကလာကြည့်ကြတာ။ တချို့ဆိုနှစ်တိုင်းလာကြတာများ လေး ငါးနှစ်ဆက်တိုက်ပဲ။ ပွဲလာရင်း မိတ်ဆွေဖြစ်သွားကြတာအများကြီးပဲ။
လေရှီး၊ လဟယ်၊ နန်းယွန်း မြို့သုံးမြို့မှာ အလှည့်ကျလုပ်ရင်း ဒီနှစ်ရဲ့ နာဂနှစ်ကူးပွဲ အလှည့်ကျတာက လေရှီးမြို့။ ခရီးစဉ်လမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ လူသက်သာတဲ့လမ်းကြောင်းက ခန္တီးမြို့ထိ လေယာဉ်စီး၊ ခန္တီးမြို့ကနေ လဟယ်/ဆင်သေထိကိုကားနဲ့သွား။ ခဏလေးပဲစီးရတယ်။ မြေပြန့်ပဲ။ (အဲ့ဒီနှစ်မြို့က တံတားပိစိလေးပဲခြားတာနော်) အဲ့ဒီကနေ လေရှီးထိကို လေးနာရီ လောက်ကားထပ်စီးရတယ်။ တောင်တန်းဖြတ်ပြီးသွားရတာမို့ အကွေ့အကောက်အရမ်းများပါတယ်။ လေရှီးရောက်ရင် ပွဲခင်းကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ မြို့ကဟိုနားဒီနားဆိုသွားစရာကုန်ပြီမို့ ရှာရလွယ်ပါတယ်။
ပွဲအကြောင်းပြောရရင်တော့ မီရှဲပဲကံမကောင်းတာပါ။ ဒီနှစ်က ပွဲကျင်းပတာ နှစ်နေရာဖြစ်နေလို့ ဘယ်မြို့မှမစည်တာနဲ့ကြုံလိုက်တယ်။ နောင်နှစ်နန်းယွန်းမြို့မှာ ပွဲလုပ်ရင်တော့ အရင်လိုပြန်ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်တာမို့ အသေးစိတ်မပြောပြတော့ဘူးနော်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်တက်တဲ့ပွဲဖြစ်လို့ လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ပါတယ်။ သောက်စားရမ်းကားရင် အကုန်ဆွဲဖမ်းသွားတာ။ ပွဲအစီအစဉ်ကလဲ သမ္မတကြီးအပေါ်မူတည်နေတာမို့ အချိန်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်တယ်။
အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ၁၄ရက် ဇန်နဝါရီလဆိုရင် ရိုးရာတိုင်ထောင်တယ်။ မနက်အစောကြီးကတည်းက စပြီ။ အချိန်အလိုက် တစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့ ကကြ။ လူမျိုးစုအကုန် အဖွဲ့လိုက်ကကြနဲ့။ အကတွေ သီချင်းသံ မြင်ရကြားရတာနဲ့တင် လူက အံ့ဩမဆုံးနိုင်ဖြစ်နေပြီ။ ၁၅ရက်နေ့ ဖွင့်ပွဲဆိုရင် မနက်ပိုင်းသမ္မတကြီးမိန့်ခွန်းပြောပြီး သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေ ဆိုင်ရာဆိုင်ရာပြောပြီးရင် လူမျိုးစု တစ်ဖွဲ့ချင်းစီ ကပြဖျော်ဖြေကြပြီ။ စိတ်ထဲမကျေနပ်တာတစ်ခုက တစ်ဖွဲ့ကို ရိုးရာသီချင်းအကအတိုင်းဆို ၁၅မိနစ်လောက်ကြာတယ်။ အခုကျတော့ ပွဲအချိန်အရ တစ်ဖွဲ့ကို ၅မိနစ်နဲ့ အပြီးကနေရတော့ ကြည့်ရတာ လောနေရတယ်။ ညဘက်မီးပုံပွဲဆိုလည်းမီးပုံပွဲကို လူမျိုးစုတွေ ဧည့်သည်တွေပါ ဝိုင်းကကြတာ။ အခုကျတော့ အဖွဲ့တွေနားတောင်ကပ်မရ။ ရှေ့ဆုံးငါးကျပ်တန်းက ကြည့်ပြီးညောင်းတာပဲ အဖတ်တင်တယ်။ ၁၆ရက်နေ့ ပိတ်ပွဲကျတော့ ခန္တီးမြို့ကိုပြန်ဆင်းလာတော့ ဘာဖြစ်မှန်းမသိလိုက်ဘူး။ ခန္တီးမြို့မှာလဲ စတိတ်ရှိုးနဲ့ ပြီးသွားတယ်။
အဲ့ဒီလိုတွေကြုံရပြီးတော့ ထပ်လာဖို့ စိတ်ကုန်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြန်မဲ့နေ့ရောက်တော့ ငါနောက်နှစ်ထပ်လာရင် ဘယ်လိုစီစဉ်မယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားပြန်ရော။ လေယာဉ်တစ်စီးထဲအတူလာတဲ့ အစ်မလဲ အဲ့ဒီလိုပဲ။ နာဂမူးယစ်ဆေး ထင်ပါရဲ့။ ထပ်လာချင်စိတ် ဖြစ်လာလို့။
Prev post: Heineken: Star CollectiveNext post: Trying to lose some weight?
Trying to lose some weight? June 24, 2020
Heineken: Star Collective December 18, 2019
ချစ်ရတဲ့ အမျိုးသမီးထုကြီးရေ … December 12, 2019